Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IDoha iya eAlmaty iinqwelomoya kwiQatar Airways ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • abantu • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IKazakhstan yiparadesi yomamkeli, enemihlaba eyahlukileyo ukusuka kwiintaba ezigqunywe likhephu ukuya kwiintlango ezinkulu, imiwonyo enamatye, amahlathi eeconifer, kunye nolwandle olungafumanekiyo. Ababhenkethi banokuyithanda imimandla eyimbali kubandakanya iitora ezityheli ezityheli zeZenkov Cathedral eAlmaty.
Inkonzo entsha yomeleza ubudlelwane obushushu phakathi kukaRhulumente waseQatar kunye neRiphabhlikhi yaseKazakhstan.
Inkonzo entsha iya kwenza ukuba abakhweli babhabhe ukuya nokubuya eAlmaty ukonwabela ukudityaniswa okungagungqiyo kwiindawo ezingaphezu kwe-140.
I-Qatar Airways iyavuya ukwazisa ukuba izakuphehlelela inkonzo yabakhweli eAlmaty, Kazakhstan ukuqala nge-19 kaNovemba 2021. Inkonzo entsha izakusebenza ngenqwelomoya iAirbus A320, enezihlalo ezili-12 kwiBusiness Class kunye nezihlalo ezili-132 kwiklasi yezoQoqosho.
Le nkonzo izakwenza ukuba abakhweli babhabhe baye eAlmaty, Kazakhstan ukonwabela ukudityaniswa okungenamthungo kwiindawo ezingaphezu kwe-140, ngeSikhululo senqwelomoya esisesona siBalaseleyo, kwisikhululo senqwelomoya saseHamad eDoha, kwiLizwe laseQatar.
Qatar Airways UMphathi oyiNtloko weQela, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Siyazingca ngokuzisa iinkonzo zethu eziphumelele Kazakhstan, ukongeza le ndawo ikhethekileyo kwinethiwekhi yethu ekhulayo. Le nkonzo intsha yomeleza ubudlelwane obufudumeleyo phakathi kukaRhulumente waseQatar kunye neRiphabhlikhi yaseKazakhstan, kwaye iqinisekisa ukuzibophelela kwethu ekuqhubekeni phambili nokuphuhlisa urhwebo nokhenketho phakathi kwamazwe ethu amabini amakhulu. ”
Kazakhstan ligunya lezoqoqosho kummandla we-Asia eseMbindini. Yiparadesi yabakhenkethi, enomhlaba owahlukileyo ukusuka ezintabeni ezigqunywe likhephu ukuya kwiintlango ezinkulu, imiwonyo enamatye, amahlathi eeconifer, kunye nolwandle olungafumanekiyo. Iindwendwe zinokuyithanda imimandla eyimbali ebandakanya iitora ezityheli ezityheli zeZenkov Cathedral eAlmaty.
IShedyuli yokuHamba ngeAlmaty ukusuka nge-19 kaNovemba 2021:
NgoLwesihlanu nangoMvulo (onke maxesha endawo)
IDoha (DOH) ukuya eAlmaty (ALA) QR 391 iyahamba: 01:15 ifika: 08:35
IAlmaty (ALA) ukuya eDoha (DOH) QR 392 iyahamba: 21:40 ifika: 23:55
Umbhexeshi welizwe lase Qatar uyaqhubeka nokwakha uthungelwano, olumi kwiindawo ezingaphezu kwe-140 ngoku. Qatar Airways ikwanemigaqo-nkqubo yokubhukisha eguqukayo ebonelela ngotshintsho olungenamda kwimihla yokuhamba kunye neendawo, kunye nembuyekezo yasimahla kuwo onke amatikiti akhutshelwe ukhenketho agqitywe nge-31 Meyi 2022.